N'ogbe ngwakọ Jade No.1 n'oge tozuru okè ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akpụkpọ skwọsh osisi Manufacturer na Supplier |Shuangxing
Akpụkpọ anụ mkpụrụ osisi:
Na-eguzogide obere mildew powdery, ZYMV, WMV2.
Jade No.1 n'oge tozuru okè ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akpụkpọ skwọsh osisi
1. Ụdị dị iche iche tozuru okè, ihe dị ka ụbọchị 38 site na ịgha mkpụrụ ruo na owuwe ihe ubi.2.Ọdịdị dị ire ụtọ na cylinder kwụ ọtọ, enweghị afọ, agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọmarịcha gloss.3.Na-eguzogide mildew powdery ntakịrị, ZYMV,WMV2.4.Ikike nke mkpụrụ osisi na-aga n'ihu dị ike n'okpuru ma elu ma ọ bụ obere okpomọkụ.5.Kwesịrị ekwesị karịsịa ka a ga-akụ n'ime ụlọ griin ha dị iche iche na ubi oghe.6.Ezigbo azụmahịa.Ebe ihe ọkụkụ:
1. Mpaghara dị iche iche nwere oge osisi dị iche iche, dịka ihu igwe mpaghara si dị.
2. N'oge na nke ziri ezi na-eji nri ala zuru oke na ngwa n'elu.
3. Ala: miri emi, ọgaranya, ezigbo mmiri mmiri, anwụ na-acha.
4. Okpomọkụ na-eto eto (°C): 18 ruo 30.
Hebei Shuangxing Mkpụrụ Company e tọrọ ntọala na 1984. Anyị bụ otu n'ime ndị mbụ ọkachamara onwe ozuzu specialized technology ụlọ ọrụ Integrated na nkà mmụta sayensị ngwakọ mkpụrụ nnyocha, mmepụta, ahịa na ọrụ na China.
Ebubatala mkpụrụ anyị n'ihe karịrị mba na mpaghara iri atọ.A na-ekesa ndị ahịa anyị na America, Europe, South Africa na Oceania.Anyị na opekata mpe ndị ahịa 150 jikọrọ aka.Njikwa ịdị mma na mgbe ọrụ ire ere na-eme ka ndị ahịa 90% na-atụgharị mkpụrụ kwa afọ.
Mmepụta na nnwale ọkwa mba ụwa anyịntọala dị na Hainan, Xinjiang, na ọtụtụ ebe ndị ọzọ na China, nke na-atọ ntọala siri ike maka ọmụmụ.
Mkpụrụ Shuangxing emeela usoro mgbasa ozi dị ukwuu na nyocha sayensị na ọtụtụ ụdị mkpụrụ nke sunflower, anyụ, egusi, skwọsh, tomato, ugu na ọtụtụ mkpụrụ osisi ndị ọzọ.
1. Ị bụ onye nrụpụta?
Ee, anyị bụ.Anyị nwere ntọala ihe ọkụkụ nke anyị.
2. Ị nwere ike ịnye ihe atụ?
Anyị nwere ike ịnye samples efu maka nnwale.
3. Kedu ka njikwa ogo gị dị?
Site na mmalite ruo na njedebe, anyị na-etinye akwụkwọ nyocha na ụlọ nyocha nke mba, ụlọ ọrụ nyocha nke ndị ọzọ, QS, ISO, iji kwe nkwa ịdịmma anyị.
Nke gara aga: Naivy Chinese oroma uhie organic ugu osisi
Osote: SXTS No.1403 Mkpụrụ Tomato Ngwakọ Pink
Ngwakọ Skwọsh Mkpụrụ
Mkpụrụ skwọsh ngwakọ
Ịkụ mkpụrụ skwọsh
Skwọsh na ugu osisi
Nnukwu anụ uhie uhie buru ibu ojii rind mmiri enweghị mkpụrụ ...
Nnukwu mkpụrụ osisi F1 ngwakọ egusi maka...
Magburu onwe ọrịa na-eguzogide f1 ngwakọ mkpụrụ nke ...
Red Jombo No.3 Musk Mkpụrụ Melon maka ọrịre
Mkpụrụ osisi mgbọrọgwụ 2021 maka itolite